विश्वभर ह्वात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन ६ लाख २४ हजार संक्रमित थपिए, कहाँ कति ? Canada Nepal
विश्वभर ह्वात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन ६ लाख २४ हजार संक्रमित थपिए, कहाँ कति ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ६ लाख २४ हजार ३ सय ८३ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २५ करोड ९६ लाख ८१ हजार ४७ पुगेको छ । यसअघि मंगलबार विश्वभर एकैदिन ४ लाख ४१ हजार कोरोना संक्रमित थपिएका थिए । यस्तै बुधबार एकैदिन विश्वभर ५ लाख ४४ हजार संक्रमित थपिएका थिए ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ७ हजार ७ सय ३५ कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५१ लाख ९१ हजार ३ सय १२ पुगेको छ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख ६२ हजार ६ सय ६४ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यससँगै हालसम्म विश्वभर २३ करोड ४८ लाख १२ हजार १ सय २७ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ७ लाख ९८ हजार २ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ४ करोड ८९ लाख ६७ हजार ९ सय ९० पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा ३ करोड ८७ लाख ८१ हजार २ सय ७६ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन्
मंसिर ९, २०७८ बिहिवार ०८:११:१६ बजे : प्रकाशित